Kuthetha ukuthini ukuphupha ilindle? Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
1 Ukuphupha ilindle
2 Ukuphupha ilindle: inokuba yintoni?
3 Ukuphupha ubona umjelo ophantsi komhlaba ohambisa amanzi amdaka
4 Amanzi amdaka avaliwe
5 Amanzi amdaka amdaka
6 Ngomjelo ohambisa amanzi amdaka ovulekileyo
7 Kungcolile ngamdaka
8 Ukuwa phantsi komsele
9 Tyhala umntu ezantsi kumjelo wamanzi
10 Ukuphupha umjelo ohambisa amanzi amdaka kunye nomntwana
11 Ukusebenza kumjelo ohambisa amanzi amdaka
12 Ukuphupha ilindle luphawu lokuzazi?
Kuqhelekile ukudibanisa olu hlobo lwamaphupha nento ecekisekayo okanye enxulumene nezinye izifo ezinokuvela. Eyona ntsingiselo ibhekiswe kakhulu kwabo baphupha ngogutyulo lelindle kukuba kuya kufuneka ukutshintsha umkhwa. Umkhwa wokuzibekel 'amangomso luphawu olucacileyo lokuba ungazoyisa iingxaki zakho kube kanye.
Kuqhelekile ukuba nomkhwa wokuzibekel 'amangomso izinto, kodwa oku kuyingozi kwaye akufanelekanga nakubani na. Xa umntu eqala ukusombulula iingxaki zakho ngokukhawuleza kunye nomqondiso ocacileyo wokuvuthwa. Namhlanje uya kuqonda iintsingiselo ezahlukeneyo kwabo banolu hlobo lwamaphupha kwaye abazi ukuba yintoni.
Ukuphupha ilindle: inokuba yintoni?
Kukho iintsingiselo ezininzi kubantu abanolu hlobo lwamaphupha, kodwa eyona iphambili yimfuneko yokutshintsha. Umjelo ohambisa amanzi amdaka yindawo apho yonke into ingenakonwatyelwa khona, ke ukungabikho zingqondweni kwenza isicelo kuwe. Kuya kufuneka ufunde ukuba olona khetho unokukhetha ngalo kukusoloko ufuna ukuvela.
Esinye isibonakaliso kwabo baphupha ngogutyulo yimfuneko yokufunda ukusombulula iingxaki. Ezinye iimeko zincinci kwaye uzenza zibe nkulu kakhulu ukuba zingasonjululwa. Ukulula sisipho esivela kuThixo, kwaye abo banokusisebenzisa ngendlela eyiyo banokufumana izibonelelo ezininzi.
Ukuphupha ubona umjelo ophantsi komhlaba ohambisa amanzi amdaka
Kuya kufuneka uqale usombulule iingxaki ezisalindelweyo kwaye oku kufuneka kukhawuleze kakhulu. Abanye abantu bazi kuphela indlela yokuzibekel 'amangomso izinto kwaye oku kuyingozi enkulu kuba ibangela iingxaki ukuba zikhule ngobukhulu. Zama ukunciphisa amaxhala akho kwaye uqonde ukuba yonke into izakulunga, zama ukuba nethemba.
Amanzi amdaka avaliwe
Unengxaki ezininzi kwaye konke oku kubangela ukuba intloko yakho iqhume. Zama ukumisela uluhlu lwezinto eziphambili ngokubaluleka kwaye emva koko uqalise ukusebenza ekusombululeni iingxaki. Ayizukunceda nganto ukungxama kwaye ungaqali ukuyisombulula ngokuzolileyo kwaye ngaphezulu kwako konke ukuzithemba.
Amanzi amdaka amdaka
Iingxaki kufuneka zoyiswe kwaye kuya kufuneka uqonde oku kube kanye. Akukho sikhalazo sisebenzisayo kwaye ukuphupha ilindle elinukayo yayingumqondiso wokuba ujongane nentloko ibambelele phezulu. Ngendlela embi ngayo le nqanaba, ixesha lifuna ukuba woyise iingxaki zakho nobuchule bokwenza izinto.
Ngomjelo ohambisa amanzi amdaka ovulekileyo
Ukusombulula ingxaki kuthintelwe kwaye kuya kufuneka usombulule yonke imicimbi yakho elindileyo. Isigaba asisihle kwaye asizukutshintsha ukuba awuqali ukwenza izinto ukuze yonke into itshintshe ngokusisigxina. Kuyacetyiswa ukusombulula ezona ngxaki zingxamisekileyo kwaye kufuneka uthathe uxanduva lokukhula.
Unesizathu sokukholelwa ukuba awuzukuphuma kweli nqanaba libi, kuba yonke into ibinzima kakhulu kuwe. Ngaphezulu kwethu kuphela uThixo omkhulu kwaye usithumela izilingo ukuze sikhule. Zama ukuqonda ukuba yonke into iyisigaba kwaye umbono unokutshintsha, kodwa kuya kufuneka uvuleke kuwo.
Ukuwa phantsi komsele
Ukuphupha ngesitayile owele kuso luphawu olucacileyo nolubonakalayo lokuba ungafumana isohlwayo. UThixo usinike umthetho wesizathu kunye nesiphumo, ke umntu uya kuhlala esohlwaywa ngeempazamo zabo. Ixesha lakho sele liza kufika, kodwa ukuba ucela uxolelo ngeempazamo zakho, awusayi kuphinda wohlwaywe.
Tyhala umntu ezantsi kumjelo wamanzi
Ubulumko kunye nokuvuthwa ziimpawu ezimbini ebezizezona njongo zabantu abaninzi, kodwa uneempazamo. Ukuphupha umjelo ohambisa amanzi amdaka apho utyhala umntu luphawu lokuba ubaleka ngaphezulu komntu. Kuya kuthatha ingcinga kwaye ngakumbi ukuqonda ukuze uqonde ukuba kuya kuyenza na into oyenzileyo.
Ukuphupha umjelo ohambisa amanzi amdaka kunye nomntwana
Olu hlobo lwamaphupha lunentsingiselo entsonkothileyo, kodwa lubonisa ukuba kuya kufuneka uzincame. Umntwana kumjelo luphawu lokuba ukusulungeka kwakho kungangcoliswa yinto embi eya kuthi yenzeke. Asikokwakho ukugweba, kwaye eyona nto unokuyenza kukuqhubeka nokulwa de ugqibe kwesi sigaba sibi kakhulu.
Ukusebenza kumjelo ohambisa amanzi amdaka
Ngethuba elifutshane uya kuba nethuba lokufumana inzuzo enkulu yezemali kunye nezinto eziphathekayo. Ukuba nolu hlobo lwamaphupha ulubonisa kakuhle ishishini, Oko kukuthi, uya kuba nakho ukukhula kunye nepropathi. Zama ukubulela uThixo kwaye uzame ukuba ngcono kwaye ungcono, kuba abantu abaninzi baya kuphefumlelwa nguwe.
Ukuphupha ilindle luphawu lokuzazi?
Ukuba uphuphe ngogutyulo, luphawu lokuba kufuneka uzazi ngcono. Funa ukuba nomsebenzi wokuzihlaziya kwaye ngaphezulu kwako konke ukuzazi ngakumbi. Eli nqanaba libi likufumana kuba awukaqondi amandla yintoni onayo